२० वर्षीय उज्जवललाई बचाउँन पुनः अपिल - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ चैत्र २०७१, बुधबार ०८:३५ |
उनी अहिले मात्र २० वर्षका भए । एउटा युवा जोश,उत्साह र भविष्यका लागि साँचेका थुप्रै सपनाहरु बोकेर आम नेपाली युवा जस्तै उनी पनि आफ्नो देश र घर परिवारलाई छोडेर अष्ट्रेलिया आएका थिए । तर उनको त्यो सपना,जोश र उत्साहमाथि अहिले एकाएक कालो बादल छाएको छ । धनी,गरिब,सानो र ठूलो कसैलाई नछोड्ने रोगले उनलाई पनि के छोड्थ्यो र ?
अन्नपानीको शरीरमा रोग सबैलाई लाग्छ । कुनै रोग सजिलै निको पनि हुन्छन् तर कुनै कुनै रोगबाट उन्मुक्ति पाउँन ठूलो धनराशी खर्चनुपर्छ । नभए कतिखेर जिन्दगी नै चुँडाएर लैजान्छ,कसैलाई थाहा नै दिन्न । सन्दर्भ २० वर्षीय नेपाली विद्यार्थी उज्वल पौडेलको हो । हाल उनी रक्त क्यान्सरले थलिएर ब्रिसबेनस्थित एक अस्पतालमा उपचारारत छन् । उनको बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने भएको छ । तर उनको हेल्थ इन्सुरेन्सले उनको बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टको खर्च व्योहर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
त्यसैले यतिखेर उज्जवल सहयोगी हात र सहयोगी मनहरुको प्रतीक्षामा छ । अनि तिनै सहयोगी हात र मनबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगले बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेर रोगमाथि विजयी बन्ने दृढ अठोटमा छन् ।
त्यसो त अष्ट्रेलियामा मात्रै नेपाली समुदायको संख्या १ लाख भन्दा बढी छ । सयौं संघ संस्थाहरु पनि खोलिएका छन्,जसले हरेक नेपालीको सुख दुखमा साथ दिने पवित्र उदेश्य लिएका छन् । अब के उज्वलको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी अष्ट्रेलियामा रहेका तिनै १ लाख नेपालीले लिन सक्दैनन् ? अवश्य पनि सक्छन् ।
त्यसैले होनाहार यी नेपाली युवालाई बचाउँन,उनको सपनालाई जोगाउँन सहयोग गर्न चाहनेहरुले उनी उपचाररत अस्पतालमा गएर प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न सकिनेछ । बैंक मार्फत सहयोग गर्न चाहनेहरुले पनि निम्न बैंकको खातामा आफूले सकेको सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
AC no:10242567,COMMON WEALTH BANK
उज्जवलको सहयोगका लागि सामजिक दायित्वबोध गर्दै हिमालयन कंगारुले पनि हार्दिक अपिल गरेको छ ।
Previous४७ लाख डलरमा पुरुष बने पप गायिका म्याडोना
Nextमृतकको शोकमा जुम्ला बन्द
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द भयो
१३ माघ २०७१, मंगलवार १२:३७
अष्ट्रेलियन इस्लामिक स्टेट आतंकवादी उच्च नेता मध्यपूर्वमा मारिएको दावी
१२ कार्तिक २०७१, बुधबार ०८:४७